X11 Coin စျေး - အွန်လိုင်း XC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို X11 Coin (XC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ X11 Coin (XC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ X11 Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ X11 Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
X11 Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
X11 CoinXC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.172X11 CoinXC သို့ ယူရိုEUR€0.145X11 CoinXC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.131X11 CoinXC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.157X11 CoinXC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.55X11 CoinXC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.08X11 CoinXC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.82X11 CoinXC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.641X11 CoinXC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.229X11 CoinXC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.238X11 CoinXC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.85X11 CoinXC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.33X11 CoinXC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.922X11 CoinXC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹12.9X11 CoinXC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.29.04X11 CoinXC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.236X11 CoinXC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.259X11 CoinXC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.36X11 CoinXC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.2X11 CoinXC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.17X11 CoinXC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩204.14X11 CoinXC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦65.52X11 CoinXC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.64X11 CoinXC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.77
X11 CoinXC သို့ BitcoinBTC0.00001 X11 CoinXC သို့ EthereumETH0.000431 X11 CoinXC သို့ LitecoinLTC0.00285 X11 CoinXC သို့ DigitalCashDASH0.00165 X11 CoinXC သို့ MoneroXMR0.00182 X11 CoinXC သို့ NxtNXT12.29 X11 CoinXC သို့ Ethereum ClassicETC0.0238 X11 CoinXC သို့ DogecoinDOGE48.35 X11 CoinXC သို့ ZCashZEC0.00169 X11 CoinXC သို့ BitsharesBTS6.53 X11 CoinXC သို့ DigiByteDGB6.31 X11 CoinXC သို့ RippleXRP0.558 X11 CoinXC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00577 X11 CoinXC သို့ PeerCoinPPC0.61 X11 CoinXC သို့ CraigsCoinCRAIG76.34 X11 CoinXC သို့ BitstakeXBS7.14 X11 CoinXC သို့ PayCoinXPY2.92 X11 CoinXC သို့ ProsperCoinPRC21.02 X11 CoinXC သို့ YbCoinYBC0.00009 X11 CoinXC သို့ DarkKushDANK53.7 X11 CoinXC သို့ GiveCoinGIVE362.49 X11 CoinXC သို့ KoboCoinKOBO37.41 X11 CoinXC သို့ DarkTokenDT0.159 X11 CoinXC သို့ CETUS CoinCETI483.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 16:25:01 +0000.